Mesa 18.2.1 inoburitswa ine akati wandei gadziriso yeVulkan | Linux Vakapindwa muropa
Mesa 18.2.1 inoburitswa ine akati wandei gadziriso yeVulkan
Munguva pfupi yapfuura Iyo nyowani yekuvandudza vhezheni yeakavhurika sosi giraidhi mesa Mesa 18.2.1 yakaburitswa ane akati wandei Bug uye kugadzikana kugadzirisa kwevatyairi veVulkan.
MESA madhiraivha ndiwo akavhurwa sosi Linux software madhiraivha anowanikwa e AMD, NVIDIA, uye Intel Hardware.
Irojekiti ye Mesa yakatanga seyakavhurwa sosi yekushandisa yeiyo OpenGL kududzirwa (sisitimu yekupa inowirirana 3D mifananidzo).
Kwemakore, chirongwa ichi chakakura kuita mamwe maAPI maficha, kusanganisira OpenGL ES (shanduro 1, 2, 3), OpenCL, OpenMAX, VDPAU, VA API, XvMC, uye Vulkan.
Mhando dzakasiyana dzevatyairi vezvigadzirwa dzinobvumidza Mesa maraibhurari kuti ashandiswe munzvimbo zhinji dzakasiyana, kubva kune software yekuteedzera kupedzisa Hardware kumhanyisa kwemaGPU anhasi.
Mesa inoshandisa inogadzira yakazvimirira dudziro nhete pakati pegrafiki API senge OpenGL uye madhiraivha emagetsi mune kernel yeiyo inoshanda sisitimu.
Pamusoro pekushandisa kwe3D senge mitambo, maseva emifananidzo anoshandisa OpenGL / EGL mafoni kuti abudise mufananidzo pachiratidziri.
Naizvozvo, ese mavara (mune izvo zviitwa zvinotsigirwa neraibhurari iyi) zvinowanzo pfuura neMesa.
Iyo yakatsigirwa vhezheni yeakasiyana graphic APIs zvinoenderana nemutyairi, nekuti yega yega ine yayo yekushandisa uye nekudaro yayo yakatsigirwa vhezheni.
Kuwedzeredzwa kwemitambo muLinux kwave kuri kukurudzira kunodiwa kusimudzira Mesa giraidhi, kunyanya ine basa rekutsigira maAPI emifananidzo, ichiratidza OpenGL (desktop nemitambo) uye Vulkan (mitambo).
1 Chii Chitsva muMesa 18.2.1 Vanodzora
2 Maitiro ekuisa Mesa vhidhiyo madhiraivho paLinux?
Chii Chitsva muMesa 18.2.1 Vanodzora
Iyo nyowani Mesa 18.2.1 inogadziridza kuburitswa ndiyo yekutanga yakagadzika poindi yeiyo ichangoburwa Mesa 18.2 dzakateedzana.
Sezvo ichi chiri chekutanga kuburitswa mushure meanoshanda kwazvo maseru ekuvandudza, pane zvakawanda zvinogadziriswa: dzinenge gumi neshanu shanduko dziri kusunungura mushure memavhiki maviri eiyo vhezheni 18.2.0.
Tafura 18.2.1 ine zvakawanda zvinogadziriswa pamberi peVulkan Radeon rAdV uye mutyairi weIntel ANV.
Kugadziriswa inosanganisira mamwe maRadeon GPU anotonhora, akasiyana CTS gadziriso kune ese madhiraivha, maitiro ekugadzirisa, uye rimwe basa.
Iyo OpenGL mutyairi kumberi inoramba ichishanda zvakanyanya neiyo RadeonSI, VC4 / V3D uye inosvika kuR600 kuona zvigadziriso pamwe neyakajairika kodhi yeMesa.
ari Mesa 18.1 kuburitswa kuri kupera nevashandisi vachiri kusarudza kusarudza kukurudzirwa kukwidziridza kune 18.2 akateedzana.
Ipo iyo Mesa 18.3 yakateedzana iri inotevera vhezheni mukuvandudza paGit yekuzivisa kutanga munaNovember kusvika Zvita.
Rondedzero izere yezvigadziriso kuMesa 18.2.1 inogona kuwanikwa mune zvinyorwa zvekuburitsa.
Si Unoda kuwana chakanakisa chiitiko chemitambo pakombuta yako yeLinux, zvinokurudzirwa kwazvo kukwidziridzira kuMesa 18.2.1 nekukurumidza sezvazvinogona.
Iyi nyowani Mesa 18.2 kuburitswa inogona kuburitswa uye kunyorwa kubva kunzvimbo dzepamutemo, kunyangwe ichi chingave chiito chine njodzi.
Iwe ungangove unokwanisa kuisa Mesa 18.2.1 kubva kumahombekombe makuru eiyo yaunofarira mashandiro sisitimu mumavhiki anotevera.
Maitiro ekuisa Mesa vhidhiyo madhiraivho paLinux?
Mesa mapakeji inowanikwa mune ese Linux kugovera, saka kuiswa kwayo kuri nyore.
Kune avo vari vashandisi veUbuntu, Linux Mint uye zvigadzirwa ivo vanokwanisa kuwedzera inotevera dura uko vatyairi vanovandudzwa nekukurumidza.
Iye zvino tava kuzovandudza runyorwa rwedu rwepakeji uye zvinyorwa pamwe ne:
Uye pakupedzisira isu tinogona kuisa vatyairi ne:
Yenyaya yeavo vari Arch Linux vashandisi uye zvigadzirwa, tinovaisa nemirairo inotevera:
Kune vese zvavari Vashandisi veFedora 28 vanogona kushandisa iyi repository, saka vanofanirwa kugonesa Corp ne:
Pakupedzisira, kune avo vanovhuraSUSE vashandisi, vanogona kuisa kana kusimudzira nekutaipa:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Mesa 18.2.1 inoburitswa ine akati wandei gadziriso yeVulkan
Compiz inogona kudzoka paLinux pasina nguva
3 misoro yakanaka kune yako Linux desktop nharaunda